Akanjo mariazy mora nefa tsara …
Inona no loko tsara ampiarahina amin’ny maitso?
Misy ireo mankafy ny loko maitso nefa sahirana mitady izay loko tsara ampiarahina aminy. Andeha ho jerentsika ireo loko mety sy tsara ampiarahin’ny maitso.
Mahay manaingo trano kelikely
Rehefa kelikely ny trano, dia tsy maintsy zaraina ho ao anatin’ny efitra iray avokoa na ny efitra fandriana na ny efitra fandraisam-bahiny. Ny fomba hanasarahina azy no mety manahirana saingy mora atao kosa rehefa miainga amin’ny zavatra tsotra.
Mahay misafidy « coussins » mety amin’ny trano
Fitaovana kely mitondra loko vaovao ho an’ny efitrano fandraisam-bahiny ny « coussins ». Ahoana anefa ny fomba hisafidianana azy mba hamoaka ilay endrika tena katsahina amin’ny efitrano?
Ny fomba fanaingoana hazonoely miloko fotsy
Tsy dia mahazatra loatra ny maro ny mividy ireny hazonoely miloko fotsy ranoray ireny. Tafiditra ao anatin’ireo hazonoely lamaodin’ity taona 2018 ity anefa izy ireny ka ho an’ ireo nisafidy ny hiova kely dia toy izao ny fomba fanaingoana azy :
Haingon-databatra tsotra fa tsara, ho an’ny Noely
Raha toa ka tsy afaka manokana vola be ho amin’ny fanaingoana ny latabatra mandritra ny Noely dia misy kosa ireo zavatra tsara ananana mba hampivoaka azy. Tsy sarotra tadiavina nefa izany akory.
Ireo fomba fanaingo trano lamaody amin’ity noely 2018 ity
Efa miditra ao anatin’ny ambiansy amin’ny fetin’ ny noely isika ankehitriny. Andeha ho jerena ny hiaka farany amin’ireo fomba fanaingo ny trano ka samy haka izay tandrify sy mety aminy ny tsirairay.
Zaridaina hafa kely
Aingam-panahy kely foana, nalaina avy amin’izay kojakoja ananana dia efa azo hamoronana haingon-jaridaina mahafinaritra ny maso.
Ny akanjo mariazy no jeren’ny mpanotrona mpanambady voalohany eny amin-drazazavavy.
Rariny loatra, araka izany, raha sarotiny amin’izy itony ny vehivavy hanambady. Ity akanjo mariazy entinay aminao ity izao dia vita avy any Chine. Anisan’ireo manaraka ny toetr’andro ny endriny. Tsara ihany koa ny haingony, izay isan’ny mampiavaka azy. Lava sady mivelatra tsara ny “traine”, ka ho afa-po tanteraka ireo izay mankafy azy ireny. 300.000 Ariary ny vidiny ao amin’ny “Flashy” Antaninandro, ambony tetezana Behoririka.